Google Pixel3ရှိအမှားအယွင်းအသစ်ကြောင့်ကင်မရာကိုပိတ်ပစ်လိုက်သည် Androidsis
ဂူဂဲလ်၏နောက်ဆုံးပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်ကတစ်ခုရှိကောင်းရှိနိုင်သည် အတန်းအစား ဦး ဆောင်ကင်မရာ, သို့သော်၎င်းသည်အမှားအယွင်းများမရှိပဲယခုစာရင်းထဲသို့ထည့်ရန်အခြားပြproblemနာတစ်ခုရှိသည်။ အချို့သူများအတွက်ကံမကောင်းစွာ Third-party application များတွင်ကင်မရာကိုအသုံးပြုခြင်း pixel3အမှားတစ်ခုဖြစ်စေနိုင်သည် သင် reboot သည်အထိအရာလုံးဝကင်မရာကိုပိတ်ထားသည်။ Archive ကင်မရာအက်ပလီကေးရှင်းသည်သင်ဖုန်းကိုပိတ်ပြီးသည်အထိအလုပ်မလုပ်ပါ။
အတွက်ပြproblemsနာများကိုတင်ပြပြီးနောက် သတင်းသိုလှောင်မှုတွင် ဝန်ထဲမှာ ဓာတ်ပုံချွေတာခြင်း နှင့်အခြားကဏ္sectionsများအတွက်, ဖုန်းကို Google ကဒီဇိုင်းရေးဆွဲတာကိုယုံဖို့ခက်တယ်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဟေး, ငါတို့ကဲ့သို့သောအမှုအရာဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြောင်းမေ့လျော့တော်မမူ pixel 2.
ပြtheနာကိုပြသရန်လိုအပ်သောအဆင့်များသည်မျှမျှတတရိုးရှင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည် ဖုန်းအားလုံးကိုမထိခိုက်ဟုထင်ရသည်ဒါကြောင့်အသုံးပြုသူအချို့ကကံကောင်းသည်။ သင့်ကိုယ်သင်စစ်ဆေးခြင်းသည်ကင်မရာကိုသုံးနိုင်သောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖွင့်သကဲ့သို့ (ဥပမာ၊ Snapchat သို့မဟုတ် Android Messages) နှင့်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသည်။ အကယ်၍ ပြtheနာကြုံတွေ့ရပါကကင်မရာစွမ်းအင်သည်အနက်ရောင်မှသာလျှင်“ ကင်မရာနှင့် ချိတ်ဆက်၍ မရပါ” သို့မဟုတ်“ သေစေနိုင်သောအမှားနှင့်ကြုံတွေ့ရသည့်ကင်မရာစက်ပစ္စည်း” ကဖော်ပြသည့်အမှားတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။
Weirdest Pixel3bug - မည်သည့်တတိယပါတီအက်ပလီကေးရှင်းအတွက်မဆိုကင်မရာအသုံးပြုခွင့်ကိုဖွင့်ပြီးအလုပ်မလုပ်တော့တာလား။ pic.twitter.com/R48Fe0vJAL
- Owen Williams ⚡ (@ow) အောက်တိုဘာလ 25, 2018
reboot ကပြproblemနာကိုယာယီဖြေရှင်းပေးပြီး Google Camera အက်ပ်ကိုထပ်မံအလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုသည်။ ဒါပေမယ့်ထိခိုက်နစ်နာသူတွေအတွက်၊ တတိယပါတီအက်ပ်ကင်မရာကိုသုံးတိုင်းပြနာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အခုအချိန်မှာတစ်ခုတည်းသောရေရှည်ဖြေရှင်းချက်ကတော့ third-party apps များအတွက်ကင်မရာခွင့်ပြုချက်ကိုလုံးဝပိတ်ပင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိခိုက်နစ်နာသောစက်ကိရိယာများတွင်စက်ရုံပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်စနစ်ပြည့် ၀ ခြင်းသန့်ရှင်းခြင်း / ပြန်လည်ခြင်းပင်ပြevenနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါ။
အပါအဝင်အချို့သောအခြား devices များ pixel2XLထို့အပြင်ထိခိုက်နိုင်ပါသည်, နှင့်အခြားအစီရင်ခံစာများကပြproblemနာသည်နောက်ထပ် Pixel3နှင့် Nexus ထုတ်ကုန်များ၌ပင်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ Pixel XNUMX ကိုထိခိုက်သောအစီရင်ခံစာများအဘယ်ကြောင့်တိုးများလာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသေချာသော်လည်း
ငါတတိယပါတီအက်ပ်ဖြင့်ကင်မရာကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးစားသည့်အခါတိုင်း၊ ပုံမှန်ကင်မရာအက်ပ် မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာမဆို၊ ကင်မရာပျက်သွားပြီးကျွန်ုပ်ဖုန်းကိုပြန်မဖွင့်မချင်းပြန်လည်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။
- ဖျာဟွန်း? (@mat) နိုဝင်ဘာလ 14, 2018
ရှင်းနေသည်မှာ ဒီအမှားတစ်ခု update ကိုအားဖြင့် fixed နိုင်ပါတယ်, တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးရောက်ရှိသင့်ပါတယ်။ ယခုအချိန်တွင်အမေရိကန်သည်ကုမ္ပဏီ၏ကြယ်ပွင့်စမတ်ဖုန်းတွင်အခြားစိတ်ပျက်စရာကောင်းသောအားနည်းချက်များမပေါ်ပေါက်မှီတိုင်အောင်စိတ်ရှည်စွာစောင့်ဆိုင်းနေရပါမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Google Pixel3တွင်ပြနာများဆက်ရှိနေသည်။ ယခုတွင် bug သည်ကင်မရာကိုပိတ်ထားသည်